Ntụle ekwentị: Doogee V10 vs Doogee V20 | Ozi gadget
Miguel Hernandez | 20/12/2021 08:51 | Mobiles, Telephony
Doogee na-aga n'ihu na nzọ n'ahịa maka ekwentị mkpanaaka na nke siri ike, ya bụ, ha nwere usoro njirimara nke na-eme ka ha dị iche iche na karịsịa na-eguzogide ọgwụ. Nke a bụ ka ha siri malite ịmalite V20, ngwaọrụ nke edobere dị ka njedebe nke ahụmahụ na nraranye ọtụtụ afọ. Doogee V20 ọhụrụ bụ onye ga-anọchi anya Doogee V10, ihe nlereanya nwetara nnukwu nsonaazụ. Ngwa abụọ ahụ nwere ụfọdụ myirịta, ma o doro anya na ha nwere nnukwu ọdịiche n'ihi nnukwu ihe ọhụrụ nke afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị na-atụnyere ha.
Jiri uru Doogee V20 Dual 5G na-enye site n'ịdenye aha n'etiti ndị mbụ 1.000 zụrụ.
1 Myirịta nke ngwaọrụ abụọ ahụ
2 Ọdịiche dị n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ
Myirịta nke ngwaọrụ abụọ ahụ
Otu n'ime isi ihe dị n'etiti ngwaọrụ abụọ a bụ na ha abụọ na-amalite site na mmalite na ọ bụrụ na ha agbajighị, ọ dịghị mkpa ka edozi ha. Modelsdị abụọ a na-ebugo ihe nrụpụta isi asatọ iji meziwanye arụmọrụ ha ma nye atụmatụ n'usoro nke ụbọchị. N'otu aka ahụ, Ha nwere ihe mmetụta mkpịsị aka dị n'akụkụ bezel nke ngwaọrụ ahụ, igwefoto selfie 16MP na chaja ngwa ngwa ruru 33W yana NFC. na nkwado maka ọtụtụ ugboro na-eme ka ha dakọtara na mpaghara ọ bụla.
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ ma ọ bụghị, ngwaọrụ abụọ ahụ nwere asambodo kachasị elu n'ihe gbasara iguzogide ihu igwe adịghị mma nke ụdị ọ bụla dị ka. IP68, IP69K na n'ezie ọkọlọtọ agha MIL-STD-810 na ya pụta ìhè.
Otú ọ dị, ugbu a bụ oge ilekwasị anya na ndịiche na-egbuke egbuke.
Ọdịiche dị n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ
Dị ka ihe dị iche iche, ochie Doogee V10 nwere temometa infrared na azụ iji nwee ike ịlele okpomọkụ ngwa ngwa, agbanyeghị, na. Doogee V20 chọrọ ịga n'ihu n'ihu wee gbakwunye ihuenyo ọhụrụ na azụ nke ga-enye anyị ụfọdụ ozi dịka ọkwa. oge na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe na ruo ugbu a anyị hụrụ naanị na ụfọdụ elu-ọgwụgwụ ọnụ.
Ihuenyo AMOLED ka mma yana mkpebi dị elu
Ihuenyo azụ iji nye anyị ozi
Ihuenyo n'ihu ma ọ bụ isi ewerewokwa ihe dị mkpa, na nke ahụ bụ na anyị na-ahụ ugbu a ihuenyo na-egbuke egbuke AMOLED nwere mkpebi 6,43 inch FHD + nke na-abịa dochie kpochapụla 6,39-inch HD + mkpebi LCD nke etinyere na Doogee V10. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a abụrụla otu n'ime mmụba kachasị mkpa n'ihe gbasara mgbanwe na teknụzụ ọgbara ọhụrụ, n'otu ụzọ ahụ. AMOLED panel nke Doogee V20 nke Samsung rụpụtara ga-enye akụkụ 20: 9 tụnyere 19: 9 nke Doogee V10, nwere nnukwu ọdịiche na ike HDR, na-eme ka nchapụta nke ọ nwere ike ịnye.
N'okwu a, nha na mAh nke batrị na-ebelata nke ukwuu, Mgbe Doogee V10 nyere 8.500 mAh, Doogee V20 ọhụrụ ga-anọ na 6.000 mAh. Ebe ha abụọ na-ejigide ụgwọ ngwa ngwa 33W, Doogee V20 ọhụrụ ahụ ga-enye chaja ikuku na ụkpụrụ Qi ruru 15W, nke karịrị 10W nke chaja ikuku nke Doogee V10 na-edobe ugbu a. Nke a na-eme ka Doogee V20 dịkwuo kọmpat ma dị ọkụ, Otú ọ dị, Doogee na-ekwe nkwa na a na-ejigide oge eji ngwaọrụ ahụ na batrị dị ala n'ihi njikarịcha ma na Sistemụ Ọrụ yana na ọkwa ngwaike, ihe niile a doro anya na-erite uru na panel AMOLED na ya. ugbu a na-eji na nke mma oriri nke ihuenyo on.
Igwefoto bụ isi ihe ọzọ nwetere mmetụta kachasị na nrụgharị ahụ, ka anyị leba anya na igwefoto abụọ ahụ:
Igwefoto ọhụụ abalị 20MP
Igwefoto akụkụ obosara 8MP
Igwefoto macro 2MP
Site na ebe a igwefoto emeziwanyela nke ọma dịka anyị hụworo, mgbe ọ na-anọgide (dị ka anyị kwuru na mbụ) arụmọrụ dị mma nke igwefoto selfie 16MP n'ihu.
N'ọkwa ebe nchekwa na nchekwa, Doogee V20 na-eto site na 128GB nke V10 ruo 256GB nke ihe nlereanya ugbu a, iji teknụzụ UFS 2.2 iji melite arụmọrụ mbufe data. N'ezie, a na-echekwa 8GB nke RAM nke ngwaọrụ abụọ ahụ.
O doro anya na Doogee V20 bụ mgbanwe pụtara ìhè nke na-achọ ịkwado ihe nketa nke Doogee V10, aga n'ihu nke Doogee V Series nke a ga-enyekwa ya nnukwu mbelata na enye na portal Doogee gọọmentị. A ga-ekwupụta ụbọchị mwepụta n'oge na-adịghị anya, a ga-anabatakwa ndị hụrụ ekwentị siri ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Ntụle ekwentị: Doogee V10 vs Doogee V20